Ruushka: Hablo aabahood oo kufsaday dilay, dadkuna u damqadeen - BBC News Somali
22 Agoosto 2019
Image caption Hablaha in ay aabahood dileen lagu eedeeyey
Bishii Juulaay 2018 ayaa saddex hablood oo walaalo ahi aabahood oo hurda toori ku dileen gurigooda oo ku yaal magaalada Moscow.
Dembi baadhayaasha ayaa caddeeyey in hablahaa aabahood sannado badan faroxumayn jidh iyo mid maskaxeed ba ku hayey.
Eedda dilka ah ee lagu oogay iyo waxa ay hablahaa walaalaha ahi mudan doonaan ba waxay noqdeen doodda ugu kulul ee ka taagan Ruushka waxaana dad ka badan 300,000 ay saxeexeen codsi lagu doonayo in lagu sii daayo.
Maxaa aabahood ku dhacay?
Goor fiid ah 27 Juulaay 2018-kii ayaa Mikhail Khachaturyan oo da'diisu ahayd 57 ayaa makhsinkiisa mid mid ugu yeedhay hablihiisa Krestina, Angelina iyo Maria oo markaa aan qaan gaadh ahayn. Wuxu ku dilay in aanay guriga si fiican u nadiifin oo basbaas ayuu wejiga kaga buufiyey.
Isla wax yar ka dibna waabu iska seexday, hablihii baa middi iyo dubbe la dhacay oo basbaasna ku buufiyey dhaawacyo halis ahna ka gaadhsiiyey madaxa, qoorta iyo laabta. Waxa la arkay in 30 goor lagu dhuftay midi.
Hablihii yaryaraa markaasay booliska telefoon u direen oo isla bartii baa lagu xidhay.
Baadhitaankii waxa isla markiiba lagu ogaaday in qoysku lahaa taariikh dheer oo dagaal ah. Khachaturyan had iyo goor wuu ulayn jiray hablihiisa muddo saddex sannadood ah, wuu jidh dili jiray oo guriguu ku xidhan jiray oo weliba faro xumayn jiray.
Caddaymaha aabahood lagu hayo ayaa dacwadda lagu oo oogay na lagu soo hadal qaaday.
Dagaalka qoysaska ayay arintani dibadda u so saartay
Dacwaddani waxay isla markiiba Ruushka ka dhalisay dood sharci. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in hablahaa walaalaha ahi aanay dambiileyaal ahayne dhibbaneyaal yihiin maadaama oo aanay heli karayn taakulo iyo cod ka ilaalisa aabahoodaa budh la duulka ahaa.
hase ahaatee Ruushku ma laha sharciyo daryeela dadka dagaalka qoyska ku dhibtooda.
Image caption Bannaan bax ka dhacay magaalada St Petersburg oo lagu taageerayo hablaha walaalaha ah
Wax ka bedel sharciga lagu sameeyey 2017 ayaa dhigay in qofka marka ugu horraysa garaaca qof qoyska ka mid ah laakiin aan dhibtuu gaadhsiiyo dhakhtar loo dhigin, lagu kuxumi karo uun ganaax ama xadhig laba todobaad ah.
Booliska Ruushku badanaa ba waxay dagaalka qoyska u arkaan "arimo qoyska u gaar ah" oo wax badan ma taraan qofka ama maba caawiyaan.
Habalaha walaalaha ah hooyadood oo qudheeda uu garaaci jiray Khachaturyan ayaa booliska u tagtay sannado ka hor, jaarkooda oo xataa isaga ka baqayey ayaa booliska ku ashkateeyey laakiin ilaa hadda lama hayo caddayn muujinaysa in boolisku dacwadahaa wax ka qabteen iyo in kale.
Image caption Hablaha hooyadood, Aurelia Dunduk, ayaa sheegtay inuu Mikhail iyada guriga ka eryey 2015-kii
Markii dilku dhacay hablaha hooyadood guriga lama ay deganayn Khachaturyan na hablihiisa uu ka mamnuucay in ay la xidhiidhaan.
Sida ay caddaysay qiimaynta dhakhtarka dhimirku, habluhu go'doon bay ahaayeen oo waxaaba hayey dhibta ay maskaxdooda gaadhay.
Maxaa dhacay intii baadhitaanku socday?
Dacwadda hablaha ilma Khatchturyan gaabis bay ku socotay. Imika xabsiga kuma jiraan laakiin dhaqdhaqaaqoodaa xadidan, lama hadli karaan warfidiyeenka oo xataa iyaguna ma wada xidhiidhi karaan.
Xeer ilaalintu waxay ku adkaysanaysaa in dilka Khachaturyan ahaa mid loo badheedhay maadaama oo uu hurday, hablaha walaalaha ahina ay mar qudha gacanta wada saareen oo midiyaha ay ku dileenna subaxii hore sii qarsadeen. Ujeedadoodu in ay odayga ka aarsadaan ayay ahayd, ayay ku doodday xeer ilaalintu.
Image caption Hablaha walaalaha ah oo maxkamadd la horgeynayo Juun 2019, Angelina ayaa sawirka ka muuqata
Haddii lagu helo eeddaa lagu oogay, hablahaas waxa ku dhici kara xukun 20 sannadood oo xabsi ah. Waxa la sheegayaa in Angelina iyadu dubba la dhacday, Maria midida Krestina-na ay basbaaska ku buufisay.
Hase yeeshee, qareenka u doodaya hablaha walaalaha ah ayaa leh dilku xaqiiqdii wuxu ahaa fal isdifaac ah. Run ahaantiina xeerka ciqaabka Ruushku isdifaacidda qofka gardarro cad iska waabinaya dembi kuma qaado iyo mararka "fal dambiyeed is xig xigaa dhaco" sida in qof la af-duubtay la jidh dilayo [oo uu is difaaco]
Garyaqaannada difaacu waxay ku adkaysanayaan in walaalahaasi muddo dhibbaneyaal u ahaayeen "fal dambiyeed joogto ah" sidaa awgeedna ay tahay in la sii daayo. Hablahaha qareennadoodu waxay ku rajo wayn yihiin in eedda lagu soo oogay la laali doono maadaama oo dambe baadheyaashu caddeeyeen in dhibaatada uu ku hayey Khatchaturyan hablihiisu ay soo taagnayd ilaa 2014-kii
Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo dad badan oo Ruush ahiba waxay doonayaan in sharciga la bedelo oo ay dawladdu samayso meelo lagu daryeelo dadka sidaa loo galo ookale iyo in la soo saaro sharciyo waalidka ka ilaalinaya caruurta ay dhibaataynayaan.
Heerkee ayuu gaadhay dagaalka qoysku?
Ma jirto xog buuxda oo laga hayo tirada dumarka Ruushka ah ee ku dhibaataysan dagaalka qoyska, waxa jiraa waa qiyaas uun laakiin dadka u dooda xuquuqda aadanuhu waxay qabaan in badan tahay oo ay ka dhigantahay afartii qoys ba mid.
dhacdooyin door ah oo naxdin badan ayuun baa warbaahinta gaadhay oo ay ka mid ahayd mid qabsatay gabadh la odhan jiray Margarita Gracheva oo ninkooda oo hinaasay gacmaha faash kaga jaray.
Image caption Margarita Gracheva waxay aad uga hadashaa dagaalka qoyska tan iyo intii gacma laga jaray.
Khubarada qaarkood ayaa sheega in 80% dumarka jeelasha Ruushka ugu jira dilalku ay qof ku dileen iyagoo is difaacaya.
Waxa meelo badan oo Ruushka ah ka soo baxay dad cadhaysan oo ka soo horjeeda hablhaa ilma Khachaturyan kuwaas oo ka mid ah bulshada inta muxaafidka ah. Urur la yidhaa Talo Waa Rag oo u ololeeya "u hogaansanaanta ragga" iyo "waddaniyadda" oo ay xubno ka yihiin qiyaastii 150,000 qof ka ololeeya baraha bulshada ayaa bilaabay olole ay hal qabsigiisu yahay "Gacan ku dhiigle yaasha ha la xidho" waxaanay ku nuuxnuuxsanayaan in aan hablahaa walaalah ah la sii daynin.
Waxa intaa dheer olole kale oo ka socda baraha bulshada oo lagu doonayo in dacwadda hablhaa lagu soo oogay lagu laalo, waxa kale oo socday xaflado suugaaneed, banaan baxyo iyo riwaayado lagu taageerayo.
Daria Serenko, oo ah haweenay u ololaysa xuquuqda haweenka oo reer Moscow ah ayaa bishii Juun qabanqaabisay bannan bax saddex cisho socday waxaanay sheegtay in u jeedadu ahayd in shacabka arinta hablahaa aanay iloobin oo qof waliba helo fursad uu ku helo isaga oo aan cabsanayn.
"Dagaalka qoysku waa xaqiiqo ka jirta nolosha Ruushka. Ma dafiri karno laalkiin waa wax saamaynaya nolosheenna xataa haddii aanay qof ahaan inoo soo marin" ayay tidhi.